စိုက်ပျိုးရေးစက်ရုံကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan ,OEM,ODM-cropprotectionmachinery.com
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan စိုက်ပျိုးရေးစက်ရုံကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
မီးခိုးအကျိုးသက်ရောက်မှု-တိုးတက်မှုနှုန်း parameters တွေကိုနှင့်စိုက်ပျိုးမှု၏အာဟာရဖွဲ့စည်းမှုအပေါ်ရေ.
မီးခိုး-ရေသင်္ဘောသီးပျိုးပင်များ၏ကြီးထွားမှုကိုမြှင့်တင်ရန်.10 နှင့်အတူပြည့်နှက်နေချိန်တွင်စိုက်ပျိုးပျိုးပင်များ%မီးခိုး-ရေ signi ပြသﬁပိုကောင်းတဲ့ကြီးထွား parameters တွေကို cantly(16 အညွန့်နှင့်အမြစ်များကိုအများဆုံး elongated နှင့်အတူ.7 နဲ့ 21.9 မီလီမီတာ.လိုအပ်သလို)ထိန်းချုပ်မှုပျိုးပင်ထက်(11.1 နှင့် 11.8 မီလီမီတာ,လိုအပ်သလို).ပျိုးပင်လည်း signi ပြသﬁရိုက်ကူးလတ်ဆတ်တဲ့အလေးချိန်အတွက် cant တိုး,ခြောက်သွေ့သောအလေးချိန် shoot,အမြစ်လတ်ဆတ်တဲ့အလေးချိန်,ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်များနှင့်အမြစ်သွေ့ခြောက်သောအလေးချိန်.သို့သော်ငြားလည်း,l0%မီးခိုး-ရေအပင် signi ခဲ့ﬁအရွက်၏ သာ. ကြီးမြတ်အရေအတွက်ကို cantly.ဓာတ်လှေကားလိုရိုဖီးလ်အကြောင်းအရာ,နှင့်ပိုမိုပျိုးပင်သန်စွမ်းအညွှန်းကိန်း(9.0,34.5,နှင့် 38650,လိုအပ်သလို)ထိန်းချုပ်မှုပျိုးပင်ထက်(7.8.29.7,နှင့် 22970,လိုအပ်သလို). (Jenjira Chumpookam,Huey-လိန်း Lin1,နှင့် Ching-Chang Shiesh 2012)
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.cropprotectionmachinery.com/my/agriculture-plant-protection.html
စိုက်ပျိုးရေးစက်ရုံကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ထုတ်လုပ်သူနှင့် စိုက်ပျိုးရေးစက်ရုံကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစ ,OEM,ODM-ကျော် 7,080 ကမ္ဘာတဝှမ်းဝယ်လက်မှာ cropprotectionmachinery.com